Mpianadahy nitaingina môtô scooter no sendra izany ka namoy ny ainy teo noho eo ilay tovovavy vao erotrerony. Raha araka ny fanazavan’ireo nanatri-maso dia rehefa nandeha tsara iny izy mianadahy dia nisy fiarakaretsaka nijanona tampoka teo anoloan’izy ireo. Voatery nanitsaka tsindry hisatra tampoka ilay môtô nentin’izy ireo. Mafimafy anefa ny fifehezana izany ka nianjera tampoka ity tovovavy kely namoy ny ainy ity izay notsenain’ilay kamiao iray lehibe nifanena tamin’izy ireo. Voahitsaka vokatr’izany ny lohany ary potika tanteraka ka nifantsitsitra ny rà. Nampihetsi-po ny maro ity tranga omaly folakandro teny Manakambahiny ity. Nisy tamin’ireo nanatri-maso mantsy no niantso ny Fitondram-panjakana mihitsy mba hijery akaiky ity filalaovana môtô eto amintsika ity noho izy hamoizana ain’olona maro. Nantsoina toraka izany koa ireo ray aman-dreny manan-janaka manana môtô mba samy hitandrina avokoa ary indrindra hanoro ireo menaky ny ainy satria lahitokana ny aina.